Top 5 máy xay tiêu dành cho bà nội trợ tốt nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 máy xay tiêu dành cho bà nội trợ tốt nhất 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 máy xay tiêu dành cho bà nội trợ tốt nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ngokuvamile, ukugaya upelepele ngesandla akukwazi ukwenza upelepele ufane. Ingasaphathwa eyokuthi ilahlekelwa ukunambitheka kwayo okuningi futhi yenza izinto zibe lula ekubunjweni, njll.
Ngaleso sizathu i-pepper grinder wazalelwa ukukusiza ukuxazulula zonke izinkinga ezishiwo ngenhla. Umshini uhlangene, kulula ukuwusebenzisa, futhi usiza ukugaya upelepele ngokushesha ngenani eliphakathi. Nazi izigayi zikapelepele ezi-5 eziphezulu eziphephile neziqinile ezithenjwa omama abaningi basekhaya.
1 Izigayi zikapelepele ezi-5 ezihamba phambili zango-2022
1.1 Elmich EL7155 pepper grinder jar
1.1.1 Ukubuyekeza okusheshayo i-Elmich pepper grinder EL7155
1.2 Khiya & Khiya i-porcelain blade grinder CKO115
1.2.1 Ukubuyekeza okusheshayo Khiya & Khiya i-porcelain blade grinder CKO115
1.3 I-Malloca pepper grinder MMPM-657A
1.3.1 Ukubuyekeza okusheshayo i-Malloca pepper grinder MMPM-657A
1.4 DandiHome 304 insimbi engagqwali pepper grinder
1.4.1 Ukubuyekezwa okusheshayo kwegrinder ye-pepper yensimbi engagqwali engu-304 i-DandiHome
1.5 Igrinder yemvelo yegobolondo yegobolondo lemvelo (GA07)
1.5.1 Ukubuyekeza okusheshayo Igrinder yepelepele yegobolondo lezinkuni (GA07)
2 Ithebula lokuqhathanisa le-pepper grinder ehamba phambili ka-2022
3 Izinzuzo zokusebenzisa i-pepper grinder
4 Ukuhlukanisa izinhlobo ezahlukene zokugaya upelepele ezitholakala emakethe
5 Okuhlangenwe nakho okumbalwa ongakhetha ukuthenga i-grinder ye-pepper
5.1 1. Khetha i-pepper grinder enesakhiwo kanye nomklamo ofanele indawo yekhishi
5.2 2. Khetha umshini wokugaya upelepele kuye ngezidingo zakho
5.3 3. Khetha umshini wokugaya upelepele ngokusekelwe ekhonweni lezomnotho
5.4 4. Khetha i-pepper grinder ngemvelaphi kanye nomkhiqizo
6 Imuphi umkhiqizo we-pepper grinder okufanele ngiwukhethe?
6.1 Elmich EL7155 pepper grinder jar
Izigayi zikapelepele ezi-5 ezihamba phambili zango-2022
Ama-pepper grinders anemigqa eminingi, izinhlobo eziningi, ngakho-ke ukukhetha umkhiqizo ofanele udinga ukuchitha isikhathi esiningi ucwaninga. Ngokuqonda ukuba matasa kwakho, ngicwaninge ngokucophelela futhi ngathola laba abalandelayo abangu-5 “abahle”:
Uphawu lokuhweba: Elmich
Elmich EL7155 pepper grinder jar
Ukubuyekeza okusheshayo i-Elmich pepper grinder EL7155
I-Elmich EL7155 pepper grinder inosayizi omuhle Ihlangene, ilingana entendeni yesandla sakho. Kodwa ngenxa yesivalo sensimbi engagqwali kanye nomzimba wengilazi osindayo, manene isetshenziswe kahle kakhulu.
Nje Vula isembozo kancane futhi upelepele uchotshoziwe Kalula. Amazinyo okugaya upelepele wePlastiki awunandaba nopelepele omncane noma omkhulu. Into kuphela gaya kancane ubude.
Ngaso sonke isikhathi uma ugaya upelepele, ungasebenzisa inani elifanele kuphela ngoba umthamo wayo ungama-140ml yekela.
Kodwa ngokubuyisela, iphuzu lakhe elikhulu lokuhlanganisa yilokho Ingcole kancane futhi kulula ukuyihlanza. Ngemuva kokusebenzisa, ungasebenzisa indwangu ethambile ukuze usule igobolondo langaphandle ukuze lihlanzeke.
Ukusebenzisa idivayisi isikhathi eside, usengayibona icwebezela. Ikhanda lokugaya lisasebenza kahle futhi akabambekanga nhlobo. Ngempela, lo mshini oqinile kakhulu.
Umzimba wamanzi, isivalo sensimbi engagqwali, insimbi yepulasitiki
Uphawu lokuhweba: Khiya & Khiya
Khiya & Khiya i-porcelain blade grinder CKO115
Isitayela sokukhanya sikanokusho
Ukubuyekeza okusheshayo Khiya & Khiya i-porcelain blade grinder CKO115
Khiya futhi Vala igrinder kapelepele CKO115 enomumo wembiza Icocekile futhi nenhle. Umzimba wenziwe ngengilazi ekhanyayo ukukusiza Kulula ukubona inani lepelepele ngaphakathi.
Ngaso sonke isikhathi uma ugaya pepper, ungakwazi gaya upelepele owanele umndeni omncane. I-porcelain blade ebukhali kakhuluvula kancane bese upelepele uchotshozwa ngokushesha.
Elinye iphuzu engilithanda kakhulu isembozo esenziwe nge-oki yemvelo kuphephe kakhulu ukusebenzisa. Izinkuni nazo ziqinile kakhulu Ilimele kancane uma isetshenziswa.
Kodwa imbiza yengilazi iyashelela kancane, ukubamba kulula ukushelela. Osisi abawisa ngephutha baphuka ngaso leso sikhathi ngenxa yayo hhayi ukujiya kakhulu.
Isitsha seglasi, i-porcelain blade, isivalo se-oki
Uphawu lokuhweba: I-Malloca
I-Malloca pepper grinder MMPM-657A
4 amazinga okugaya
Ukubuyekeza okusheshayo i-Malloca pepper grinder MMPM-657A
I-Malloca MMPM-657A i-pepper grinder enesendlalelo ingaphandle elisiliva elicwebezelayo ngoba yenziwe ngensimbi engagqwali. Osisi bayayisebenzisa Angesabi amabala noma okunzima ukuwahlanza.
Umthamo wakhe mkhulu kunomshini we-Lock&Lock ngoba kuze kufike ku-180 ml. Ngekhaya elinabantu abaningi noma ukupheka, ukukhetha i-Malloca MMPM-657A kuhle.
Ngokungafani neminye imishini eshibhile, ukugaya i-ceramic core yalo mshini hhayi kuphela ibukhali kakhulu kodwa futhi kulula ukwenza ngokwezifiso izindlela ezi-4 zokugaya ngokobukhulu bohlamvu ngalunye lwesinongo.
Ngikhumbula ukuthenga upelepele omkhulu kakhulu nsuku zonke Akukho ukwesaba ukuminyanisa idivayisi uma uyisebenzisa.
Into iwukuthi Intengo yayo iphakeme kancane. Abesifazane abangesabi le nkinga bangachitha imali eningi ukuthenga idivayisi.
Ngaphezu kwalokho, i-stainless steel case ayigqwali, kodwa kulula kakhulu ukunwaya uma isetshenziswa.
Ikesi lensimbi engagqwali, inezikhala zommese we-ceramic, isivalo sensimbi engagqwali
Uphawu lokuhweba: DandiHome
DandiHome 304 insimbi engagqwali pepper grinder
Ukubuyekezwa okusheshayo kwegrinder ye-pepper yensimbi engagqwali engu-304 i-DandiHome
I-DandiHome pepper grinder jar enomzimba wengilazi obala kulula ukubona, kulula ukuyibona. Isethi yesivalo sika “yena” yenziwe ngensimbi engagqwali engu-304, ngakho ungaqiniseka ukuthi Ayigqwali noma ilimaze.
Njalo uma ugaya upelepele, ungawugcina isikhathi eside ngoba Umthamo wayo ungama-180mlkufanele kubizwe ngokuthi inkulu impela.
Ukugaya pepper, udinga nje ukusonta ngobumnene isivalo ngesandla sakho nge-ceramic blade ngaphakathi.
Kuye ngezidingo zakho, ungakwazi Lungisa ikhanda lokugaya ngokwewashi ukugaya upelepele noma reverse milling uma ufuna upelepele omkhulu.
Kodwa isivalo sembiza asiqinile. Pepper isikhathi eside uzolahlekelwa iphunga ngaphezulu noma ngaphansi. Lokhu ukususa okukhulu kakhulu.
Umzimba wembiza yengilazi, isivalo sensimbi engagqwali, i-ceramic blade
Xem Thêm Máy rửa bát Bosch có dịch vụ bảo hành tốt không? | Muasalebang
Igrinder yemvelo yegobolondo yegobolondo lemvelo (GA07)
Ukubuyekeza okusheshayo Igrinder yepelepele yegobolondo lezinkuni (GA07)
Umshini wokugaya upelepele onegobolondo lokhuni lwemvelo (GA07) uma uthi nhlá ngokushesha ngicabange ngesibalo sentombazane amajika athambile.
Icala Kwenziwe ngokuphelele ngokhuni lwemvelo Isiphetho esipholishiwe kwandisa ukukhanga esibukelini. Lo mshini ufanelekile kakhulu ekhishini lendabuko.
Umthamo we-pepper jar 180ml kufanele ugaye upelepele omningi isikhathi ngasinye emndenini wabasebenzisi abangu-5, 6 kancane kancane.
I-porcelain blade ngaphakathi kwekhanda lokugaya kulula ukuzungezisa ngakho-ke udinga nje ukusonta kancane ngaphandle kokuchitha umzamo omncane.
Akugcini nje ukugaya upelepele, lo mshini oguquguqukayo nawo Ingakwazi ukugaya upelepele kanye nezinhlobo eziningi zembewu yezinongo ezomisiwe okunye. Ungayisebenzisa ngokunethezeka ngenkathi upheka.
Kodwa iphuzu layo elikhulu lokususa liwukuthi Iphunga lezinongo linamathela okhunini isikhathi esidekulula ukubangela ukudideka uma usebenzisa.
Kungakhathaliseki ukuthi isivalo se-blender siqine kangakanani, ngeke silingane ngokuphelele futhi uma ufuna ukuhlanza futhi okunzima ukukuqaqa.
Isivalo sokhuni, i-porcelain blade
Ithebula lokuqhathanisa le-pepper grinder ehamba phambili ka-2022
Izinzuzo zokusebenzisa i-pepper grinder
Izinzuzo ze-pepper grinder
Nakuba i-blender incane, inomklamo we-ergonomic, inikeza izinzuzo ezilandelayo:
Gaya upelepele ngokushesha ukuze ungachithi isikhathi esiningi
Gaya upelepele kahle, ngokulinganayo, ngaphandle kwezinhlayiya ezinkulu njengezindlela zokugaya zendabuko
Lungisa usayizi wepelepele ngemuva kokugaya ngendlela othanda ngayo
Sebenzisa ngokushesha lapho kudingeka, gcina ukunambitheka okugcwele kwepelepele
Ubukhulu nesisindo se-pepper grinder sincane, asithathi isikhala esiningi sekhishi
Dala umshini wokugaya upelepele kanokusho nesimanje, ofaka isandla ekhishini.
Intengo ayiphezulu kakhulu, ilingana nje nezinye izinhlobo zamathuluzi okugaya.
Ukuhlukanisa izinhlobo ezahlukene zokugaya upelepele ezitholakala emakethe
Ukuhlukaniswa kwe-pepper grinders
Ama-pepper grinders avame ukuhlukaniswa ngokusekelwe kumklamo. Nawa ama-pepper grinder ajwayelekile asetshenziswa kakhulu emakethe:
I-pepper grinder jar: Lokhu kubhekwa njengomklamo ovame kakhulu we-pepper grinder wemindeni. I-jar blender inomklamo ohlangene futhi kulula ukuyisebenzisa. Uma udinga ukuyisebenzisa, udinga nje ukubeka upelepele kusibambi sikapelepele bese uzungeza kancane ikhanda lokugaya pepper.
Umshini wokugaya udaka: Lo mklamo uthi uyasinda, mkhulu futhi kunzima ukuwusebenzisa ngenxa yesiqukathi sikapelepele esikhulu kakhulu. Phakathi naleso sikhathi, inhloko yokugaya i-pepper ayisebenzi ngokuvumelana nomshini ojikelezayo, kodwa igaya upelepele nge-shaft eyindilinga, i-shaft ejikelezayo esondweni, njll.
Okuhlangenwe nakho okumbalwa ongakhetha ukuthenga i-grinder ye-pepper
Isipiliyoni sokuthenga i-pepper grinder
Ungakhetha kanjani ukuthenga i-pepper grinder engcono kakhulu? Imibandela okufanele uyinake ngalesi sikhathi isakhiwo somklamo, ukusebenza kanye nezindleko.
1. Khetha i-pepper grinder enesakhiwo kanye nomklamo ofanele indawo yekhishi
Uma isikhala sakho sasekhishini siqinile, khetha umshini wokugaya upelepele omise okwembiza. I-pepper grinder emise okwembiza inesakhiwo esihlangene, kulula ukuyigcina ekhishini.
Qaphela ukuthi kufanele ukhethe umkhiqizo onengxenye kapelepele obala ukuze lapho ugaya ukwazi ukulawula ukuthi ungakanani upelepele ngaphakathi.
Ngokubuyisela, uma isikhala sakho sasekhishini sivulekile futhi sikhululekile, kufanele ukhethe i-grinder ye-pepper grinder. Lo mshini uzogaya inani elikhulu likapelepele, ngokushesha futhi vele isakhiwo sawo sibuye sibe nzima kakhulu.
Kubalulekile futhi ukuthi ungakhohlwa ukukhetha i-pepper grinder ngokhuni, insimbi engagqwali noma ingilazi ukuze uqinisekise ukuphepha okuphezulu esikhundleni sokukhetha imbiza yepulasitiki.
2. Khetha umshini wokugaya upelepele kuye ngezidingo zakho
Uma umndeni wakho unamalungu amaningi, ngokuvamile upheka noma uqhuba ibhizinisi lokudlela, kufanele ukhethe umshini wokugaya upelepele. I-grinder ye-mortar ayigcini nje ngokugaya inani elikhudlwana futhi elisheshayo likapelepele, kodwa futhi ligaya usawoti, ubhontshisi wekhofi, ubhontshisi, njll., eguquguqukayo kakhulu futhi elula.
Ngokuphambene nalokho, uma indlu ingadingi ukusetshenziswa okuningi, kufanele ukhethe kuphela ukuthenga i-grinder ye-pepper emise okwembiza. Lo mshini unomklamo olula futhi ococekile, okwenza kube lula ukuwusebenzisa futhi kulula ukuwuhlanza.
3. Khetha umshini wokugaya upelepele ngokusekelwe ekhonweni lezomnotho
Emakethe namuhla, abagayi bakapelepele banamanani asukela kumashumi ezinkulungwane ezimbalwa zama-dong ukuya ezigidini ezimbalwa zama-dong. Kuye ngekhono lezomnotho lomndeni wakho, ungakhetha umshini wokugaya upelepele ofanelekayo.
4. Khetha i-pepper grinder ngemvelaphi kanye nomkhiqizo
Izigayi zikapelepele zemikhiqizo yaseVietnam zizoba nenani eliphansi kunemikhiqizo yemikhiqizo edumile evela eJalimane, eCzech Republic, njll.
Uma unezimo zomnotho, kufanele unikeze okuthandayo kuma-pepper grinders angenisiwe. Njengoba zenziwa kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje, ukukhiqiza okuphezulu nempilo ende yesevisi kuqinisekisiwe.
Ngaphezu kwalezi zindlela ezingenhla, lapho ukhetha i-pepper grinder kufanele futhi ucabangele ezinye izinkinga njengokuthi ungakanani umthamo wepelepele owanele? Ingabe i-pepper mill blade igqwalile noma cha? Ingabe isici somkhiqizo sifana nezidingo zami?
Imuphi umkhiqizo we-pepper grinder okufanele ngiwukhethe?
Ezigayweni ezi-5 zikapelepele ezivelele ezethulwe ngenhla, ngincoma ukuthi ukhethe i-Elmich EL7155 umshini wokugaya upelepele. Lo mkhiqizo unikeza umuzwa omuhle kakhulu futhi cishe wonke umsebenzisi unikeza impendulo enhle ngale ndlela elandelayo:
Mayelana nomklamo: I-Elmich EL7155 pepper grinder inomklamo ohlangene, oqinile oqinisekisa kokubili ukunethezeka nokunethezeka, futhi kulula ukuyihlanza.
Mayelana nezici: I-Elmich EL7155 isiza ukugaya upelepele ngokushesha nangokushelela emizuzwaneni embalwa. I-blender iqinisekisa ukunambitheka kwezithako ezihlanzekile.
Mayelana nokuphepha: I-pepper grinder yenziwe ngensimbi engagqwali nengilazi, ngakho ihlanzekile futhi iphephile empilweni.
Mayelana nenani: I-Elmich EL7155 ivela ohlotsheni oludumile lwase-Czech Republic kodwa inenani elishibhile uma kuqhathaniswa. Intengo yokuthengisa yomkhiqizo iyathengeka kwabesifazane abaningi.
Qaphela: I-Elmich EL7155 pepper grinder iyinketho ekahle kodwa iyinkomba kuphela. Uma uthanda, ungazikhethela omunye umshini ongcono futhi ofanele izidingo zakho.
I-Pepper grinder iyithuluzi lasekhishini eliklanywe ngamagiya amaningi uma lisebenza, lizozungeza ukusiza ukugaya upelepele ube usayizi omncane njengoba ufisa. Ama-pepper grinder anezinhlobo eziningi, ahlukile ngosayizi, ukusebenza, nezici.
Impendulo ithi cha. Ungakwazi ukuhlanza i-pepper grinder ngemva kwezikhathi ezingu-2-3 zokugaya. Nokho, ku-blade, kufanele usebenzise indwangu emanzi ukuyisula ngemva kokugaya ngakunye ukuze ugweme ukugqwala.
Vele akunjalo. Ubukhulu be-pepper yomhlabathi buncike kakhulu ekutheni usebenzisa amandla amaningi noma amancane uma ugaya.
Isigayo sikapelepele sisebenza ngendlela ezungezayo yamagiya angaphakathi. Azikho izinto zikagesi, ngakho-ke ngeke zithinte noma zilimaze lapho zihlanzwa ngqo ngamanzi.
Ku-pepper grinders ezenziwe ngokhuni nensimbi okulula ukugqwala, kufanele uqaphele ukuthi kufanele zikhishwe noma zomiswe ngemva kokuhlanza ngokuqondile ngamanzi.
I-pepper grinder enkulu ngokuvamile igaya inani elikhulu likapelepele, ngesivinini sokugaya esisheshayo. Kodwa-ke, zizosinda ngakho kuzothatha amandla amaningi. Ubukhulu be-pepper grinder enengqondo bungaba ngu-12cm.
Ngenhla ulwazi oludingayo ukwazi mayelana ne-pepper grinder – ithuluzi elivamile lasekhishini namuhla. Sethemba ukuthi lesi sihloko sizokusiza ukuthi uthole ulwazi oluwusizo kakhulu ukuze uthole umkhiqizo ongcono kakhulu kuma-grinders we-pepper aphezulu angu-5 okukhulunywe ngenhla. Uma unemibuzo, ungakhohlwa ukushiya amazwana ngezansi!
Realme C1 – Chính hãng, giá bán, trả góp | Muasalebang
5 Cách Làm Dầu Dừa Nguyên Chất Tại Nhà Cực Đơn Giản | Muasalebang